Uluvo lwam: I-iPhone 5C yenza ingqiqo enkulu kwiApple | IPhone iindaba
Uluvo lwam: I-iPhone 5C yenza ingqiqo enkulu kwiApple
UCarlos Sanchez | | iPhone, iPhone 5c, Ezahlukeneyo
Kwakukho abantu ababecinga ukuba iApple izakukhupha Ixabiso eliphantsi le-iPhone. Ubuncinci enye ebingabizi, batsho. Kwaye ngelixa kusengqiqweni xa ufuna ukufikelela kubantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka, uyaphulukana nayo xa ufuna ukuphumelela umthengi ongenamdla. Kwaye ndiza kuchaza ukuba kutheni ndicinga ukuba kunjalo.
1 Umcimbi wamanani
2 Imibala yabo bonke
3 Asia: China kunye neJapan
I-Apple inyuke kakhulu kwimarike yemasheya kule minyaka mihlanu idlulileyo enkosi kwi-iPhone, kwaye ibuye yawa kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo ngenxa yayo. Isizathu silula: ukukhula kwemivuzo kuye kwacothisa kwaye i-Apple khange ikwazi ukuqhubeka nokukhula, ibangela ukuba ixabiso layo kwimarike yesitokhwe lehle kangange-30%. Izibonelelo bahlala benenkohlakalo, yeyona inkulu kolu shishino, kodwa iyekile ukukhula.
Isizathu asikho nzima ukufumanisa: Ukubeka i-iPhone kwintengiso kubiza kakhulu ngoku kunakwiminyaka yakutshanje, ke ukuba kuthengiswa ngexabiso elifanayo, inzuzo ikhula kancinci. Kwaye nge Ifowuni ye-5C U-Apple uze nesisombululo esibonakala silumke ngokwenene kum, oko kuthetha ukuba inxenye yokuqala yesicwangciso inokuchazwa njengempumelelo. Cinga, sele uyiqondile? Siza kubona ukuba yinyani na.
Imibala yabo bonke
Yonke imveliso yetekhnoloji inexabiso layo lokuvelisa ekuqaleni, kwaye njengoko iqhubeka, iyancipha kwaye ukusebenza kuyaphucuka (istokhwe esilinganiselweyo sesiqalo semveliso yeApple siyinto yakudala), kuba ikhonkco lemveliso lilungisiwe kwaye iiodolo zinkulu. Kungenxa yoko le nto ngoku, yenza i-iPhone 5 I-Apple ilungile ngexabiso kunye nexesha, kodwa endaweni yoko ngekhe bathengise ipesenti enkulu kuba abantu bafuna ukuthenga imodeli yamva nje, kwaye ukuhlawula i-euro ezingama-600 kwimodeli ephelelwe lixesha asilocwangciso lukhulu kwisininzi.
Isisombululo sabo basuka eCupertino sibe yinto entle kumgangatho wentengiso kunye neshishini: sithatha i-iPhone 5, sisusa eyona ibiza kakhulu (i-aluminium, imiphetho epolishiweyo ...), siyipende ngemibala emihlanu njengoko besenzile I-iPod (ebisebenza ngexesha layo) kwaye siyayithengisa njengemodeli entsha enesiciko esitsha sangasemva. UManzana kunciphisa iindleko zokuvelisa, yazisa imodeli entsha enomtsalane ngakumbi kubaphulaphuli abancinci kwaye inyusa inzuzo kwi-iPhone nganye ethengisiweyo. Kwaye akukho mntu ukhathaza ukuthenga i-iPhone 5C, kuba ayisiyiyo imodeli endala kwaye ephelelwe lixesha, yimodeli entsha. Ayifani ukuthenga i-iPhone 4S xa i-5 ifumaneka kunokuthenga i-5C xa i-5S ifumaneka.
Kuyinyani okuthethwa ngabantu: i-599 euros (ixabiso lasimahla eFrance nangaphezulu eSpain) akubizi, bekukho nabo bafuna ukuba ixabise i-euro ezingama-399. Kodwa izinto ziyatshintsha xa siqonda ukuba umvuzo ophakathi e-US umalunga $ 50000 ngonyaka -nenye into eyenye, kodwa ukujikeleza- kunye ne-iPhone 5C iya kubiza i- $ 549 yasimahla. Sisishumi somvuzo wenyanga, ngelixa eSpain yinxalenye ephezulu yokuhlekisa yomvuzo, kunye nexabiso le-iPhone (inyuswe yirhafu ephezulu eYurophu). Ukunika umntwana wakho i-iPhone ebiza ishumi lomvuzo wakho akuyi kudala iingxaki, ukuba imele isiqingatha okanye isithathu sayo, izinto ziyatshintsha. Kwaye iApple ithengisa eUnited States ngokungathi bekungekho ngomso, amatyeli amaninzi kunaseSpain, umzekelo.
Asia: China kunye neJapan
Ukuba kukho umntu olindele ukuba I-iPhone ngexabiso leHuawei ebengalunganga. Kodwa ukuthengisa i-iPhone kwiziphathamandla ezibini ezinkulu e-China akukho ngaphantsi kwesigidi se-800 sabathengi abanokuthi bafune ukuthenga i-iPhone. Baninzi abathengi, iApple iyayazi kwaye yiyo loo nto bezama kathathu apho, kubandakanya nelizwi eliphambili lokwazisa ngesivumelwano esibalulekileyo neChina Mobile.
Kwelinye icala, eJapan i-iPhone khange ithandwe kakhulu, iyavakala. NTT DoCoMo ilawula ngaphezulu kwe-50% yabathengi abahambahambayo eJapan, kwaye kude kube namhlanje bekungekho sivumelwano noApple sokuyinikela. Ngoku ikhona, ke ngoku yenye into ebalulekileyo yokuthengisa esele ilungile eJapan, ethi njengoko benditshilo ibingengobundlongondlongo kodwa ibanele ngaphezulu kwale meko.
I-Apple ayithengisi, kwaye ngekhe ithengise iimveliso ezinexabiso eliphantsi. Kwaye akakhange akhuphe incwadana (iminyaka yamarhe angenasiseko kudoti), kwaye akazukubeka ithebhulethi enexabiso eliphantsi (i-iPad Mini ayisiyiyo), kwaye akakhange akhuphe i-iPhone enexabiso eliphantsi. Into eyenziweyo ibikukusungula ifowuni ukuze ufumane izigidi zabathengi (ngakumbi phakathi kwe-18 kunye ne-30 yeminyaka ngokwembono yam) kunye nokuphucula umda wenzuzo, eya kuyivumela ukuba iye esidlangalaleni. Kuba lowo uthenge i-iPhone 5 kunyaka ophelileyo, eyona nto iqhelekileyo kukuya kwi-iPhone 5S ngaphandle kwesidingo sonyuselo okanye ukubonisa ishishini, kwaye ukuba akunjalo, uya kubambelela nge-iPhone 5 ngomonde elinde i-6.
Ndigqibile, into yokugqibela. I-iPhone 5C ibonakala kum iphone enkulu. Umqolo owomeleleyo, ozinzileyo kunye nohlala ixesha elide weplastikhi (ongaphezulu kwealuminiyam okanye iglasi) kwisiqwenga esinye esinganyangekiyo kwiminwe yeminwe kunye nokungcola okuvela ezandleni, imibala eqaqambileyo, egubungela ngabalinganiswa abaninzi (ndiyabathanda) kunye namandla angaphezulu. ye-iPhone 5 ngaphakathi, edityaniswe ne-iOS 7 isinika isiphelo sendlela esibalaseleyo. Kodwa ndinike isilivere 5S engcono, Tim.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 5c » Uluvo lwam: I-iPhone 5C yenza ingqiqo enkulu kwiApple
Izimvo ezi-70, shiya ezakho
Uluvo lwam kukuba bebefanele ukuba bazisusile ii-4s kwintengiso kwaye bayishiya i-5c ngexabiso eliphantsi, i-5 njengoluhlu oluphakathi kwaye ii-5 zibiza kancinci kuba i-5 siselfowuni elungileyo endingekhe ndiyitshintshe kude phuma enye inezibonelelo ezininzi kunezi-5.
UCarlos Santana Sanchez sitsho
Ngokuya kwakho ... ngendishiye u-5, kunye no-5c no-5s (u-3 ko-4 intshi kunye nesixhumi sokukhanyisa) ... okwenzekayo kukuba iqhinga lika-Apple lalikukususa i-5c endaweni ye-5 kunye Yandisa umda wenzuzo, endaweni yokwandisa ukuthengisa xD.
I-5s ngokuqinisekileyo ilungile kakhulu, kodwa kukhuphiswano oluphandle, kungangcono ukulinda i-Iphone 6 kwaye ubone ukonyuka okuncinci kubungakanani bescreen, ukunciphisa imida njl.
Phendula uCarlos Santana Sanchez
UJimmy iMac sitsho
Yongeza isikrini yonke enye into kwaye ususe iqhosha lasekhaya
okanye ayonakalisi njenge iphone 4
Phendula uJimmy iMac
UCarlos Sanchez sitsho
Kucacile ukuba i-iPhone 5 ingaphezulu kokwaneleyo, enyanisweni kude kube izolo bekuyeyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso ngokoluvo lwam. Kodwa i-5S iphindwe kabini ngokukhawuleza, ikhamera ebhetele, isivamvo somnwe ... andazi ukuba iyaluthethelela na utshintsho, kodwa amanqaku anele ukoguquka "okuncinci" njengemodeli S ekufanele ukuba yiyo.
Phendula uCarlos Sánchez
Yeyona nto ingamampunge endakha ndayiva kuApple nakwi-iphone 5c.
Abantu bafuna i-iPhone entsha, kulungile… uza kuthenga i-5c? Andicingi njalo ... kuba ukuthenga iplastikhi, uchitha ngaphezulu kwaye une-5, yeyiphi engcono, akunjalo? ayisiyi kuphela kugqityiwe kodwa kumqhubekekisi, ikhamera, njl
Ngokubhekisele kwi-Ipad Mini, andazi ukuba liphume liphi ixabiso, kodwa yayikwi-329 euro (ngoku ingaphantsi). Ngaba i-8 intshi ye-aluminium iPad Mini inexabiso elingaphantsi kwe-4-intshi yeplastiki ye-iPhone?
Ndiyazi ukuba kwi-iphone kufuneka udibanise izinto ngakumbi kwisithuba, kwaye iphone ine-3g xa imodeli esisiseko ye-Ipad Mini ingenayo ... kodwa ngaba kukho umahluko omninzi kwindleko ephindwe kabini?
Ndiyakholelwa ukuba bubuqhetseba kumthengi kwaye elo xabiso lenziwa njengesiqhelo, kukhetho kwaye kunganyeliswa uphawu lwe-Apple.
Ngokoluvo lwam, ngekhe iphulukane nodumo. Ukunikezela ngemveliso elungileyo ngexabiso "eliphakathi" ngekhe kulususe ukhuphiswano kwaye ayizukuyenza njalo ... siza kubona ukuba kwenzeka ntoni ngale iphone 5c, kodwa ngethemba lokuba ithengisa kancinci kwaye baya kunyanzeleka ukuba bayisike ixabiso labo kabukhali.
-Baza kuthengisa iqela le-iPhones 5C. Kwiintsuku ezimbalwa, mhlawumbi nge-22 kaSeptemba okanye nge-23 i-Apple iyakubhengeza ezo ithengisileyo ngeentsuku zokuqala zokuphehlelelwa. Izigidi, kwaye andizukuyithenga, kwaye nawe ngekhe (kuba ujonge ubuninzi), kodwa uninzi lwabathengi abanokubakho abaJongi izinto zamva nje.
- Malunga nePad Mini. Ineendleko, iindleko, kwaye iyakubiza (de kuphume entsha, ukuba bayakwazi ukuyinyusa okanye, ndiyayithandabuza, bayithobise) i-euro ezingama-329 nakweyiphi na iVenkile ye-Apple, kokubini ngokwasemzimbeni nakwi-Intanethi. Kwaye i-aluminium iPad Mini ixabisa kancinci kuba inkulu (ibiza kakhulu kwaye ichanekile ukuyenza), ayinaso isibonisi seRetina, kwaye ayinayo i-eriyali ye-3G / LTE (evumela i-aluminium engena ngxaki).
Umkhonyovu wabathengi? Akukho buqhetseba ukuba akukho kuthengwa, kwaye nabani na owuthengayo kungenxa yokuba bafuna njalo. Kubonakala kum ukuba ayisiyiyo inkohliso, kodwa ayifanele i-euro ezingama-600 nokuba. Nokuba i-5S ayixabisi i-700. Lixabiso lentengiso. Abantu bayayihlawulela, iApple iyabeka.
Sibizana malunga ne-xD efanayo, ngokuqinisekileyo iya kuthengisa, kuya kufuneka ithengise into ... kodwa ndithi ... ngaba kungcono ukuthenga ii-5 ngokuthe ngqo?
Oonobangela bexabiso elisezantsi le-Ipad Mini sendisele nditshilo, i-retina screen sindibalekile, nangona kunjalo kubonakala ngathi sisizathu esaneleyo somahluko omkhulu kangako.
Kum ukuba bubuqhetseba, andikathengi kwaye umkhonyovu khange ube kum, kodwa uya kuba ngowomthengi. Kucacile ukuba nabani na oyithengayo iya kuba kungenxa yokuba befuna, kodwa umda wenzuzo ka-Apple ziidolophu ezi-4 kude naleyo zezinye iinkampani kwaye oko kubonakala ngathi kukukhwabanisa kwabathengi.
Kwaye ngaphezulu ngoku bagcina iindleko kwi-5c kwaye bayinikezela ngexabiso elifanayo ne-5, ESI NGUMBUZO. sikunika ngokufanayo kodwa ngomgangatho omncinci ngexabiso elifanayo ...
kukuba siza kubona ... abantu abafuna ukuba ziimfama ukuba babe ziimfama, kodwa ke akufuneki senze izizathu okanye sizame ukweyisela abanye xD
Ewe kungcono ukuthenga i-5S, kodwa kungcono ukuthenga iGuijuelo okanye iJabugo ham kwaye abantu abaninzi bathenga isinxibo esiphezulu ukugcina i-euro ezimbalwa.
Andenzi sizathu okanye ndizame ukweyisela nabani na, ndicacisa kuphela ukuba kutheni kufanelekile oko kufanelekile. Ixabiso lesixhobo limiselwa ngabantu abafuna ukusithenga. Ngaba ayisiyo ngakumbi inkohliso yokuthengisa nge-9 kaSeptemba nge-5 ngexabiso elifanayo njengosuku lokuqala lokusungulwa? Mhlawumbi ewe, kodwa ukuba kukho abantu abayithengayo, iphi ingxaki?
Logama nje iApple ithengisa, iyakuseta naliphi na ixabiso elifunayo. Kungcono ukuba bathethe ngokwasemalini bathengise i-2 nge-600 kune-6 nge-300. Xa abantu beqonda ukuba baya kusiqonda isizathu sokuba i-5C ixabise i-euro ezingama-600.
Ewe ithengisa into iphelelwe lixesha ngexabiso elifanayo.
Ndicinga ukuba uphoswa ziinkcukacha ezininzi malunga nentengiso, enje nge-ecosystem ye-iOS kunye nentengiso yeapps kwiVenkile yeApp.
Ngokucacileyo i-iPhone ebiza i-150-200 ye-euro ukuyenza inenzuzo ngakumbi, ukuyithengisa nge-600, kune-300, kodwa ukuba ibiza ama-300, iya kuba nentengiso ephindwe kabini okanye nangaphezulu kwaye oko kuya kuthetha ukuba:
-iOS iya kufumana isabelo sentengiso kwi-Android.
-Ziya kudibanisa ngakumbi yonke indalo.
-Baza kufumana imali eninzi ngeeapps, kuba inani elikhulu labantu, kokukhona kuya kubakho ukwanda kwentengiso.
Ayisiyiyo yonke into emalunga nesibonelelo semveliso, kodwa sisibonelelo esipheleleyo esiveliswa yile mveliso ngenxa yezinye izinto.
Ndinayo ngaphezulu kokucacileyo ... ukuba bafuna ukuzuza umhlaba kwi-Android, abekho kumkhondo olungileyo, lowo we-iOS "wezityebi" awungeni kwi-iOS "kuye wonke umntu", uxolo.
4S ngaphandle. Isinxibelelanisi sombane wonke umntu.
I-5C € 299 yasimahla. Ukususa intengiso kwi-Android, etyiwayo kodwa kakuhle kwaye ngamanye amaxesha kuya kufuneka unciphise imida ukuze unyuse intengiso. KuGoogle kufuneka baxhume luvuyo.
I-5S € 599 yasimahla. Ixabiso eliphezulu lokugqibela.
Kwaye i-5S iyaqhubeka nokuza ngesikhalo se-16GB ezulwini. Bebenomlinganiso ofanayo kwiminyaka emi-3, kwaye nge-100 euros phakathi kwabo.
Ukumiswa kakubi kweApple.
Inqaku elilunge kakhulu uCarlos, kwaye uphumelele ngokupheleleyo kuyo yonke into. Konke okugqibelele!
Andivumelani nenqaku kwaye andizukuzonwabisa kakhulu.
Into ekukuphela kwayo endinethemba lokuba ivela kwi-Iphone 1c kukuba inenkxaso-mali elungileyo evela kubaqhubi, emva koko ndiza kuyibona i-5c ngamehlo angcono.
2. Ukuthi bathetha ngemibala, babeke iplastikhi kuba ngekhe bafeze ezo thowuni yi-bullshit. I-Ipod Touch, umzekelo, inemibala emihle kwaye yenziwe ngealuminium.
3. Mhlawumbi ndingomnye we-taliapple, kodwa ukuthenga i-5c, ukufumana i-100 ye-euro kunye ne-5s, kuya kuba yinto encinci ... ... okanye nokuba ucinga ukuba inkqubo ye-Android imbi kakhulu, I-150 yeeros ingaphantsi kwe-Htc One, eyifowuni enkulu, uphawu olukhulu, kwaye yakhiwe kakuhle.
4. Enye yezinto endizithandayo malunga ne-iphone kukwakhiwa kwayo okanye ubuhle bayo. Nge-5c, ndilahlekelwe yenye yazo.
5. Ukuphelisa u-5, kubonakala ngathi kukungakhathali kwaye ngaphezulu kushiya ii-4s. Into esengqiqweni ngeyiku…. I-5c 400 okanye i-450 euro, i-5 ye-550 euro kunye ne-5 ye-690 euro.
6. Banamandla okufikelela kwi-niche emarikeni (ngethemba lokubonelela ngenkxaso-mali yabasebenzi kunye nokufumana iintlobo ezininzi zezikrini ezinje nge-Imac, Ipod, Ipad okanye iMacbook, kodwa hayi. eyona, kodwa mandikhethe phakathi kwezinye iindidi!
7. Andikuthandi ukuthathwa njengelizwe elinenqanaba lesibini. Ukuyithenga ngoDisemba, ndilinde iinyanga ezili-5 nge-I9 kwaye ndithenge ezi-6.
8. Beka i-iPhone ye-300 euros, ayibizi mali iphantsi, kukuba nengqondo elungileyo. Ikwanayo ne-Ipod, ukusuka kwezona zisisiseko ukuya kwiTouch, okanye xa iplastiki macbook.
9. I-Apple luphawu olukhulu, kodwa bayayihlambalaza. Imisebenzi andicingi ukuba ngewayengavumela ukungabikho kwenkcukacha ngolu hlobo ngamatyala e-Iphone 5c.
Ndiyayithanda iApple, iphone ndiyithandayo kwaye ndinayo yonke into ekhaya. Kodwa andizukuncoma yonke into abayenzayo, kuba ndiyabona ukuba ubuncinci nge-iPhone, abanazo izimvo ezicacileyo.
Ubuncinci, sele sibona iziseko zento eza kuba yi-iphone entsha kunye ne-Ipad entsha enale processor, umfundi kunye nezinye izinto ezizisayo.
1.- ndiyathemba ukuba nam.
2.- Ukuchukumisa i-aluminium iPod kuyamangalisa, kodwa kathathu kuyinkimbinkimbi kwaye kuyabiza ukuyenza ngasemva, akusekho.
3.- Umntu ofuna izibonelelo akathengi i-5C, kodwa abantu abaninzi abakhetha ukugcina i-euro ezingama-100.
4.- Ndiyavuma, kodwa ASIYIMFANEKISO kubalandeli baka-Apple abanjengawe okanye mna.
5.- Ukuphelisa u-5 kusengqiqweni, kungenjalo abathengisi nesiqingatha se-5C.
6.- I-Apple ayifuni ngaphezulu kweepesenti yentengiso, ifuna izibonelelo ezingaphezulu. Kucacisiwe. Umsebenzisi othenga iselfowuni nge-euro ezingama-300 akachithi mali kwiVenkile yeApple njengaleyo uyithenga nge-600.
7.- Ndiyavuma kodwa eSpain sesibini ku-Apple, nokuba siyathanda okanye asithandi. Ngokuthenga amandla kunye neerhafu.
8.- Kukunciphisa izibonelelo. Ndikhathali.
9.- Imisebenzi yaguqula iApple kunye nentengiso enoluhlu olujikelezayo, iikhompyuter zeplastiki eziguqukayo xa zonke iiPC zazizikwere. Izembozo zijongeka KAKHULU njengemisebenzi kum.
Enkosi kakhulu ngokundiphendula uCarlos. Umbuzo omnye, ngaba unemvakalelo efanayo ne-Apple njengemihla yeMisebenzi? ngoku ndilindele ukuphuculwa kwiimveliso zakho, ezilungileyo kakhulu. Phambi kokuba ndilindele into eyahlukileyo.
Inye kuphela into endiyicelayo, kukuba bandivumele ndikhethe phakathi kweentlobo ze-iphone, ukuba bafumane kancinci kwi-niche ye-phablets.
Ndiyazi ukuba iSpain lilizwe elikwinqanaba lesibini, kodwa ayiyeki ukundibhanxa ukuba kufuneka ndinyamezele iinyanga ezi-3 ndingakhange ndibone ii5. Njengoko bendikuxelele, iinyanga ezili-9, ndilinde u-6.
Izimbozo zibubudenge. Abakwazi ukushiya igama Iphone ligutyungelwe kwaye babone kuphela, ezo nkcukacha, ndiyakuqinisekisa ukuba imisebenzi yayingenayo.
Silahlekelwe yinto eyothusayo, kodwa ayibikho ngenxa yeMisebenzi, kodwa kuba ngoku kufuneka benze izigidi ze-iPhones ngaphambi kokuba bazithengise ukuze bahlangabezane nemfuno. Akukho mntu une-sensor yeminwe, kwaye yeyona «Imisebenzi» yokuphuculwa.
Ndingalibala malunga ne-phablet niche. Zonke iiapps zenziwe ngemizobo yeRetina kodwa ayenziwanga vector, ukuze i-retina ibonakale kwi-Phablet, yonke into kuya kufuneka iphinde yenziwe ngokutsha. Ayisebenzi. Ngaphandle koko, ndiyazithanda iiselfowuni ezilingana ngesandla sakho kwaye ezihamba kakuhle epokothweni. Kwiminyaka eyadlulayo sasiphambene ngeNokia 8210 ngenxa yobukhulu bayo.
Izimbozo zikhethekile, kodwa nokuba yiMisebenzi okanye akunjalo, ndihlala ndayalela kuyilo. Ii-bumpers zikwabonakala ngathi zihlekisayo (isiciko esingagubungeliyo umphambili okanye umva) emva koko baphumelela. Ndiyabathanda, kodwa bayingozi, kwaye oko kuthetha ukuba abanye abasayi kubathanda konke konke, njengawe.
Jonga, le nto malunga nokufunda ngomnwe ekugqibeleni iya kwenzeka njenge-SIRI, esetyenziswa kuphela zi-4.
Ngokubhekisele kwinto yothusayo, ayisiyiyo eyokuveliswa kwezigidi, kungenxa yokuba baphulukene namandla okumangaliswa.
Phendula kule ndawo51
Ndicinga ukuba sikwihlabathi apho bamangaliswa ngakumbi ziindaba ezinokuziswa yi-software, kunaleyo inokuziswa yi-hardware kwaye ibonakalisiwe kubantu ababonakalise kwinkomfa ye-iOS7 VS iPhone 5C kunye ne-5S. Kwelinye icala, kufuneka sikhumbule nenxalenye yobuhle. Sinoyilo olufanayo ukusukela nge-iPhone 4, ukuza kuthi ga ngoku kuphela ubude. Into ezisa i-iPhone entsha ngaphakathi ayizukuchukumisa abo bakhoyo, kuya kuthini ukuba kuya kubachukumisa, xa sithetha ngehardware, uyilo olutsha lwe-iPhone. Kwaye yile nto ndiyilindeleyo nge-iPhone 6. Ndiyathemba ukuba bazakutshintsha uyilo kwaye alufani, lubanzi kwaye lude. Ndiyayithanda i-iPhone5S kuba ndingumntu othanda izixhobo zekhompyutha! Ndingathanda ukuthenga iGolide umbala wayo kunye nepolishi! Ndiyifumana ilungile! Ukongeza kwiprosesa yayo ye-A7 64Bit kunye ne-chip yayo yesibini iM7 kunye nomfundi ofunda ngeminwe njengokhuseleko kubonakala kum ukuba kufanelekile. Okwangoku ndine-iPhone 3GS! Kwaye kuba ndingayithandi uyilo lwe-iPhone 4, andizange ndiyithenge, okanye i-iPhone 4S, okanye i-iPhone 5 ayinakundibamba kude kube ngoku. Olu luluvo lwam nje. Umxholo ubonakala unomdla kum! Enkosi Carlos! 😄
Ukuba une-iPhones ezingaphezulu kwama-30? Hamba umoya, hamba ...
Kudala ndibetha kumatyala afana noCarlos Slim ukuba ndinee-iPhones ezingama-30, ndithenga nje i-iPhone 5 eyandibiza iqanda kwaye u-Apple uphuma nenkomo yakhe yokuyeka i-iPhone 5 ukuze kuphakame i-iPhone 5 yeplastiki.
Enye yezinto endizinikezela kuyo yimicimbi yefowuni. Ndine iPhones ukusukela ngo-2007. Hayi ngoku, bendikunye ne-Iphone5 unyaka, kodwa ngakumbi ekuqaleni bendiyithenga kwaye ndiyithengisa rhoqo.
Ndiyakuxelela, ukuba wenza inkcitho yokuqala ukuyithenga, intengiso igcinwa kakuhle kwaye ungathenga uthengise ukuba uyafuna.
Sithetha ngeselfowuni, hayi iFerrari. Nabani na unokuba ne-iphone.
UCarlos Fernandez sitsho
Ndikunye nawe ... siza kuyibona le nto ngokuthengisa! akukho mfuneko yokuba ulinde ixesha elide nangona abantu bathenga kuphela iifashoni kunye ne-iphone yenye yazo ethatha ixesha elide
Phendula uCarlos Fernandez
Ewe Mnumzana, ndivumelana ngokupheleleyo nenqaku.
Phendula kuYesu Manuel
Ewe, kubonakala kum umsindo omkhulu oko bakwenzileyo ngamaxabiso. Kuyavela ukuba bayayenza buthuntu i-iPhone 5 kwimeko yeplastiki kwaye amaxabiso kunye nemodeli yangaphambili (i-iPhone 5) ancitshiswe nge- € 69. Kude kube ngoku, basebenzise imodeli edlulileyo, ndicinga ukuba ndiyakhumbula phantse nge-150 yexabiso eliphantsi xa kwaphuma isizukulwana esitsha se-iPhone, ngokuhlonipha imigangatho efanayo kunye nezinto zokusebenza, ukanti wanelisekile ukuthethelela ukwehla kwexabiso elingenangqondo nelilahlekisayo. Ukongeza, i-5S inyuse ixabiso layo. Izilumko ngokupheleleyo zezi ezivela eCupertino.
Ngaba iyavakala ukuyibeka ngeli xabiso ?????????? siyaphambana ?? hamba uye kutshona iapile! abaqhekezi!
Kodwa iphone ayihambelani nomgangatho kunye nenqanaba lentlalontle? Yimiphi loo mibala emibi? Andizithathi njengomntwana ukuthenga i-iPhone 5c
Ukuba awunguye umntwana, thenga ii-5s zento.
okanye iphone 5 yealuminiyam enika umbono wokuba iphone 5s
Into ebonakala kum ukuba bayifumene nge-iphone 5C okwangoku kukuqhubeka nokuhla kwintengiso yesitokhwe…. Andiqondi ukuba kulungile ukuba ukhohlise abantu
Ngaba uyakopa? Ndikhethile. Uluvo lusekwe ekuthetheni izimvo neengcinga zakho, hayi eyona nyani.
Iwile kwimarike yemasheya njengokuphendula kwangoko, njengoko yawa xa i-iPhone 4 okanye i-4S yaphuma, kulwaziso ihlala iwela kwi-1-2%, kodwa uvavanyo kufuneka lwenziwe kumjikelo wobomi wemveliso.
Oko kuya kubonakala, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba ngexabiso kunye nokhuphiswano njengoko lomelele, baya kuphulukana nabathengi abambalwa endaweni yokubaphumelela! Jonga nje isicwangciso sokushiya iSpain kumjikelo we-2, oko kubonisa okuninzi malunga neshishini lika-Apple kunye nokuba likhathalele ntoni ngabathengi: i- € okanye
Ngelishwa andivumi. IFransi, iJamani ... Abo babanjiwe nge-13-20, kodwa iSpain inokulinda. Kukho ingxaki kwaye baneengxaki kwimveliso. A + B = C
xa sithetha sicela usazise kuqala.
Kuqhelekile ukuba ilahle i-1-2% emva kokubonisa kodwa imeko ngokubanzi kwii-iPhone 4s ibiphezulu. Ngoku iphantsi phantse iipesenti ezintlanu kwaye imeko iphantsi. Ke ngoko abatyali mali abekho kwicala le-Apple okoko kwaphuma i-iPhone 5 (ngesizathu).
Ndiza kuthengisa izabelo zam zeapile kwimarike yemasheya ngaphambi kokuba ziye ezantsi ngakumbi ngentengiso ephantsi abaya kuba nayo nge-iphone 5c.
Ngowuphi umsebenzi owenzela iApple. Andizukufunda into embi ngale iPhone intsha, ngokoluvo lwam, imbi kwaye iyabiza. Ukuba ngaphambi kokuba izinto zibonakalisiwe njenge- "sizathu" saloo xabiso liphezulu elenze ukuba libize kakhulu kunokhuphiswano, ukungakhathaleli ngokupheleleyo iplastiki, ngoku sinenqaku elixabisekileyo (okunene) lisazisa ukuba iplastikhi ilungile. Intlungu elungileyo, iingqondo ezithambileyo, kufuneka ukuba udiniwe lutshintsho oluninzi.
Eminye, ndiyaqhubeka nefestile yam yakudala kunye neyakudala ye-iPhone 4 enesakhono ngakumbi kuneFarinelli, iyaqhubeka ukwanelisa ezona mfuno zam.
Ndifuna ukugxininisa ukuba konke oku kungoluvo lwam, kuhlala ndinethoni ehlekisayo.
I-iPhone 5 enobuchwephesha ukusukela kunyaka ophelileyo + plasticucho = € 600, yiza, esi sisithuko kubukrelekrele, akukho sizathu sakubakho.
Ekuphela kwenkcazo esengqiqweni endinokuyifumana kukuba u-Apple ulinyusile ixabiso lesiphelo kuluntu simahla kwaye ukanti ulinika iinkampani zeefowuni ngexabiso elikhuphisanayo, ukuze babenakho ukuyinika i-99 yeeurandi ngesivumelwano seminyaka emibini (eYurophu), oku kuya kuba bubulumko. Kuba abantu bayakubona ixabiso lesiphelo simahla, iimvakalelo zokuba batsha kunye nexabiso lokhuphiswano kwaye banokuthengisa kakhulu. Yile nto kanye abayifunayo e-US, ukuba bekunjalo apha, ukuba bayayibona iyimpumelelo.
Ukucwangciswa kwakho ... Ndiza kuqhubeka kunye ne-4 yam endala
ulunge kangakanani ... andikaqondi ukuba kutheni kungekho nelinye inqaku elixela ezi nyaniso malunga ne-iphone 5c entsha ... Kazi ukuba onke la maphepha athengwe yiApple ukunika uphononongo olulungileyo kwaye abantu qala ukuzithenga kwi-xD
Iya kuba kula mazwe kuba apha eBrazil umvuzo omncinci ujikeleze i-300 yeedola kwaye i-iPhone 5 yasimahla inexabiso lama-2399 reais = iidola ezili-1000: /
Inqaku licekeceke ngokupheleleyo kwaye alinangqondo kakhulu kwimicimbi ethile ... thengisa i-iPhone eneempawu ezifanayo ne-iPhone 600 nge-5 euros (ekufuneka ibenendleko ukuba ibisahleli kwintengiso) kodwa ngexabiso eliphantsi lemveliso kwaye ithi « kukuba yi-iPhone entsha !!, kufanelekile! » Ndicinga ukuba yinto ehlekisayo kubasebenzisi beli phepha kunye ne-Apple ngokubanzi.
Andiziva ngathi bazama ukundithengisela isithuthuthu esi sixabisekileyo esixabisekileyo kuba asiyiyo, ubukhulu becala yi-iPhone 5 enezinto ezibi kakhulu, ezithi ngokwexabiso lokudodobala kunye nokuphelelwa lixesha kufuneka zihlale ubuninzi be- € 450, nantoni na ogqithileyo, ngokokubona kwam, bubuqhetseba.
Benze into enye abayenzayo ngeenqwelomoya zexabiso eliphantsi okanye iiflethi ezihlaziyiweyo ... izinto ezindala abazilungiselela uluntu ukuze zibukeke zintsha xa zingenjalo.
Eli nqaku lithi iyavakala iApple, hayi ukuba iyavakala kumthengi. Ngokwam, iphone 5C ibonakala ngathi ngumkhonyovu kum, kodwa abantu abaninzi babona izinto njengoko zinikezelwe kweli nqaku «Intsha!». Oko kubonakala kukubi kuwe okanye kum, kulungile, kodwa oko akuthethi ukuba sisicwangciso-qhinga sentengiso esiza kuthi siyizuze inkampani kwaye yile nto ndicinga ukuba inqaku lizama ukuyibamba.
UJose Torcida sitsho
Molo! Ndicinga ukuba isesisiphelo esikhulu kuba akukho mathandabuzo, kodwa bekufanele ukuba bayithengisile malunga ne- $ 400 enamahemuhemu ngelo xabiso, kubonakala kum ngathi kukuthengisa umsi. UKUBA ujonge ukhuphiswano WONKE UMNTU emva konyaka athoba amaxabiso, kuba iindleko zokuvelisa ziphantsi kakhulu phantsi kwexesha lokumiliselwa. kwaye unako, iApple ayenzi ngumgaqo-nkqubo wabo, kulungile, kodwa ngaphezulu koko bafuna ukuthengisa into ebiza ixabiso eliphantsi ngento efanayo ngokuchanekileyo ... kulungile, kubo
Phendula kuJose Torcida
Ewe kunjalo, ayibonakali ngathi sisiphelo esibi kum, ubuqhetseba kum bubonakala ngathi bunikezelwa ngamaxabiso aphantsi xa kuthelekiswa no-5 wokuba kwa-le Apple inye inciphise iindleko zayo ngokutshintsha i-aluminium anodised yokugqitywa kwepolycarbonate 😛
Ewe… uyazi ukuba ngubani ongcono kunaye nabani na onokutsho ukuba le iPhone (kunye nexabiso layo) iyavakala?… Hayi, uCarlos Sánchez aka… amanani okuthengisa kunye noluvo ngokubanzi… ayizukuba lixesha lokuqala ukuba Imveliso ibethile ngaphambili ukusungulwa kwayo (kwimeko yeXbox One kunye neNintendo 3DS) ndibhekisa kuyo.
Kodwa luluvo, aluzami "ukuyithengisa" njengenyaniso, ukuba kwa inqaku elifanayo liqala ngesihloko esithi "Uluvo lwam ...", luluvo lukaCarlos Sanchez lokuba le mveliso iyavakala kwinkampani. Andiluboni ucalucalulo, kodwa ke, ngumbandela wokungcamla ...
Umxhamli kuphela ngu-Apple, bayayishiya i-iPhone 5, ebabiza ngaphezulu ukwenza kunye nokukhupha i-iPhone 5 yeplastikhi ebiza ixabiso eliphantsi ukuyenza kodwa uyithengise ngexabiso elifanayo njenge-iPhone 5 yealuminium. Ndiyathemba ukuba i-culero ayithengiswa ngenxa yamabhongo kwaye i-iphone 5 yesekeni iyakutya i-iphone 5c kwintengiso.
Nokuba e-China, eyindawo yentengiso apho bafuna ukuthengisa ii-iPhones ezingaphezulu, bayakhala ezulwini ukuba kubiza kangakanani! Yintoni enamabala eplastiki anemibala kunye nezixhobo ze-iphone 5 ngexabiso legolide ... 🙁 🙁 iapile embi kakhulu
Kulungile kwicandelo lam awulunganga kuba ijolise kubaphulaphuli abancinci, ndineminyaka eli-18 ubudala kwaye ngekhe ndonwabe kakhulu ukuya apho nefowuni yam enemibala (phakathi kombala kunye nezinto ezibonakalayo kujongeka ngathi yinto yokudlala) . I-iPhone 5 / 5s inditsalela umnxeba ngakumbi ngokugqibezela okuvumelana ngakumbi nomgangatho oyinyani wesixhobo kwinqanaba lehardware kunye nesoftware.
Umbono kukuba siyothenga umbala omnye, okanye ukusilela oko, izigqubuthelo ezintle, ukudibanisa iimpahla esizinxiba mihla le ukuya kwi-uni Hahaha
Ndithi ndina-18 kwaye andinamdla koloyilo alungqineli kwanto, njengoko ungayithandi, kuya kubakho abanye abaninzi abakwenzayo (abancinci hayi kangako), izifundo zobalo zenzelwe ezi zinto .
Bafuna ukuba siyibeke kule fowuni ukusukela kunyaka ophelileyo apho babeke khona iplastiki ngeli xabiso, kodwa babeka ipad2 yezixhobo kwi-ipad mini kwaye bazithengise njengechurros ...
Kanye njengam ... ndinike i-5S SILVER
Makhe ndivuyisane nawe, ungumntu ocinga kakuhle kwaye ke ungumbhali!
Inqaku elilunge kakhulu…
Molo, inyani kukuba andivumi kwaphela. Kucacile ukuba iApple ayithengisi ngexabiso eliphantsi kwaye ayizukuyenza, kodwa andithandi ukubizwa ngokuba ndisisidenge ebusweni bam. Xa iApple, uGoogle okanye nabani na othabatha ifowuni ebiza X, ngokuhamba konyaka iinxalenye zinciphisa iindleko zazo ngendlela yokuba iindleko zokuvelisa ziphantsi kakhulu (ngakumbi emva konyaka) ukuba uyongeza kuloo nto Ubeka iplastikhi. ukubiza ixabiso eliphantsi ngokungenasiphelo kune-aluminiyam yangoku, ekugqibezeleni u-Apple ufuna ukusithengisela into "endala" engabizi kakhulu kodwa phantse ibe lixabiso elifanayo? I-Apple embi kakhulu. Ngokunyaniseka, kulo nyaka bekuxa ndicwangcisa ukuvuselela i-iPad kunye ne-iPhone, kodwa ndikwanayo ne-Nexus 4 kunye ne-7… namhlanje ndithenge i-Nexus 10… kwaye i-iPhone ndicinga ukuba izakulinda bade bavuyisane nam kwaye abayenzi ufuna "ukusikrazula"
Ewe kubonakala kum ukuba icebo alisiyo echanekileyo ngaphandle kokuba babeka amaxabiso ahlengahlengisiweyo, ndiyifumana ilihlazo into yokuba i-iPhone yeplastikhi ixabise i-600 yezigidi zeerandi kunye nonyaka ubudala, kwinqanaba elinzima endithetha ngalo.
Zinikezele kwenye into. Ungu-100% ongalunganga.
Kwaye njengoko kusitshiwo ukubonisa iqhosha. Ndikucaphula ngale ndlela inye, nge-Matshi 11, 2014, kwiinyanga nje ezi-6 kamva. Siza kugqabaza ngempazamo yakho nakwi-Apple.
Ndihlala ndisiqhelo kwi-Apple brand kunye neemveliso zayo, kodwa xa kukho into engenziwanga kakuhle, kuya kufuneka uyitsho kwaye ungaphumi uyokukhusela okungathethekiyo.
Isitshixo sikwisivakalisi sakho sokugqibela ...
Jonga ukuba amaTshayina athini malunga ne-5C:
Ndicinga ukuba uninzi lwethu luyavuma ukuba zombini i-iPhone 5C kunye ne-5S ziifowuni ezilungileyo kakhulu kodwa ingxaki ikwixabiso.
Ukuba i-iPhone 5C ibiphume phakathi kwe- € 350-450 yasimahla, izinto bezinokutshintsha. Sithetha ngefowuni eneempawu ze-iPhone 5. Ngokwam ndiyayithanda uyilo lwayo (hayi imeko). Kodwa i- € 600 yasimahla ibonakala ngathi kukuphanga kum, kuba benze i-terminal ngexabiso eliphantsi kwaye bayibeka ngexabiso elifanayo ne-iPhone 5.
Oku kukhokelela ekutsaleni ukhetho lwesibini kunye nokuzibuza ukuba kufanelekile ukuchitha i-100 euros ngaphezulu kunye nokuthenga i-5S. Nantsi yonke into ihambelana kakhulu, kuxhomekeke kuqoqosho kunye neemfuno zomntu ngamnye, kodwa ngokobuqu ndinayo i-iPhone 4 kwaye ndinakho ukukwazi ukutshintshela kwi-iPhone 5S andicacanga kwaphela. Sithetha nge- € 700 yesiphelo esinokuphuculwa kwayo, nangona kubonakala kulungile kum, ayithetheleli ixabiso. Ikhamera iyaqhubeka nge-8 mpx, akukho phuculo kwibhetri, nakwisikrini, nakwisisombululo, nakwisandi, okanye ukunciphisa ubunzima, njl. Ewe ine-processor ye-64-bit kunye ne-sensor yeminwe, ilunge kakhulu, kodwa ngaba olu phuculo luthethelela i-700 Euro? Lowo sele ingumbandela ngamnye, mna ngalo mzuzu ndicinga ukuba awunjalo.
Abantu abasosidenge kwaye kubonakala ngathi zombini iApple kunye neli nqaku abaphathi abantu abaziziyatha kodwa bazichaza ngokuthe ngqo ... ithini inqaku lokususa i-iPhone5 kwintengiso ukuze inike i-iPhone5c ngeplastiki? iindleko eziphantsi kwaye zithengise ngexabiso legolide ... abantu abazizo izidenge kwaye uninzi luvule amehlo, kuphela yi-2,6% yabantu abanokuba nomdla wokuthenga iselfowuni eTshayina, eyona ntengiso iphambili yale ndleko iphantsi ...
Ayenzi ngqondo kwaye kulihlazo lokwenyani ukuba kukho amanqaku anje kwaye uyimfama kakhulu okanye abalandeli bafuna ukuba uguquke ube ziigusha zenziwa mbuna yinkampani enkulu, bakuthengisela iphone5 ngeplastiki e-4 elukhuni, bayaphungula I-60 euros (okthobha 2012 iphone5 16g 669 euros) iphone5c 599 euro eFrance .. yenza olu hlobo lwenqaku ... funda iphephandaba lanamhlanje, ukuphoxeka kweapile kwisitrato eseludongeni, ukuphoxeka kweapile e-china nge-iphone5c kuthethwe ngamaTshayina ngokwawo kwi-tweet «· abantu be-apile kufuneka bakholelwe ukuba e-china siziziyatha kwaye sizizityebi», 3 yezigidi i-twits kuphela e-china egxeka i-iphone5c kwaye yi-2,6% kuphela eya kuyithenga ..
Ewe, bendikwi-iPhone iminyaka emi-6 kwaye nditshintshe iqonga kuba andinakho ukuhlawula i-600 okanye i-700 ye-euro ngeMobil, kwaye ndicinga ukuba abantu abaninzi baya kuba namava afanayo
Inqaku eliphambeneyo, kodwa kufuneka ulifunde, emva koko ufunde kwaye uqonde oku kulandelayo:
Ndicinga ukuba abo bathi iApple ayenzi ubuchwephesha kungenxa yokuba bayile inkqubo yokusebenza ngezikrini zokuchukumisa, izinto ezincinci ezathi ngexesha labo zazingakholeleki, into abayenzileyo kukucacisa imveliso yabo, egqibeleleyo kancinci kancinci, ungancancisi , ufuna ndenze amaqela ezikrini zeholographic ukuba ifowuni icocile iesile labo ukuba abalandeli batya umphunga ukuze babambe ukuwa, unganyisi!
Baza kundixelela ukuba ukubonwa okubonakalayo kwe-galaxy s4 kuluncedo kakhulu kwaye udlulise isandla sakho usiya kwelinye icala uye kwelinye ngaphaya kwescreen ngokungathi kuyatshisa, kengoku kutheni ufuna ukubanjwa ??????? Umnatha wethambo ulinde ntoni ???
Phendula u Becksoner
baphi abo baphuma amagwebu emlonyeni begxeka iplastiki? hahahaha
nangaphezulu kwe-100 yeerandi ezingaphantsi kwe-iPhone 5 esele ivele yentsimbi endala ukuya ngaphambili.
Siza kukucinezela usonge ezi Apple minyaka le ngemodeli ekucingelwa ukuba ngu "S" ngophuculo kwaye uthengisa ngathi uphambene imodeli endala !!!!
Hayi indlela elihlazo ngayo lo mgaqo-nkqubo u-Apple awenzayo wokufumana amagumbi ngaphandle kweqela!
UAlexLogan ™ sitsho
Wowu! Kuze umntu abhale ngengqondo kwaye asuse lo mkhuba we "iPhone engabizi kakhulu" u-Apple akazange athethe nto nge-iPhone enexabiso eliphantsi, bakholelwa ukuba iyodwa, kuyamangalisa nendlela abacinga ngayo ngemveliso abangayibonanga, gcina into yakho engendawo. amagqabantshintshi okuba sele ezamile umnxeba.
Phendula kwiAlexLogan ™
Kodwa ukuba iyi-m… ifowuni ngexabiso legolide… bayakuthengisela itekhnoloji yonyaka ophelileyo! Masingakulibali ukuba yi-iPhone 5 eyenziwe ngeplastikhi enemibala… ukubona kuyakholelwa! kwaye abantu baya kuyithenga bengazi nje ngokuthwala iapile elincinci emva
Phendula kuYesu Kristu
Ngapha koko inebhetri enkulu (i-10%) i-polycarbonate ayigqibi njengombala omnyama kwi-aluminium kwaye ukuba yitekhnoloji evela kunyaka ophelileyo ngokufanayo ibiza i-100 leedola ngaphantsi, nayo into enomtsalane yi- $ 99 kwi isivumelwano, ukuba Yeyona ntengiso kujoliswe kuyo. Ukuba ufuna umnxeba wangoku nantsi. IPhone 5s
Ukhusela into engathethekiyo.
Kwaye unyanisile, bathengisa iphone 5 yeplastiki.
Uthanda ungathandi, yiselfowuni endala, nangona ngoku ndineplastikhi entsha.
kwaye ijolise ebantwini ukusuka kwi-18 ukuya kwi-30 ... kunjalo, ngabo banokuthi ngoku bachithe i-600 euros kwimobile 😀
Kwaye masithi umvuzo we-NET waseMelika umalunga ne- $ 3500 ngenyanga (nditsho ukuba kuyakufuneka siyisuse irhafu ...) kuba oko kundinika ukuba ayiphindanga kali-10 ixabiso le-5C ngenyanga.
Kwaye ukuba i-50.000, 10 yeedola ibiseyinet, iyandinika ukuba ayiziphindaphinda izihlandlo ezili-XNUMX kwifowuni yeplastiki.
Masibone, kuya kufuneka ukhusele abalandeli beapile, hayi iapile; Kubonakala (okanye kunje) ukuba bakuhlawule ukuze ukhusele umntu onxibe isilika ... uxolo, iplastiki.
Andazi ukuba ingxoxo engakanani ukuba ulwela ixabiso le-iphone 5c kwaye ubuyilindele nge-euro ezingama-50, ewe, inyaniso kum ayikho, ndiza kuya ngqo kwii-5s, bah! Izinto ezibubudenge…
Umxhamli kuphela we-Apple ayeke i-iPhone 5 ukufumana i-iPhone 5 yeplastiki ebiza imali eninzi ukuyenza kodwa ayithengise ngexabiso elifanayo njenge-aluminium iPhone 5. Kwaye ungathandabuzi ukuba ukhona umntu okhubazeke ngengqondo othengisa i-iphone 5 yealuminium yakhe ukuze athenge iphone 5c.
Ezona zixhobo zisi-7 zibalaseleyo zabantwana bendlu
Ngaba kufanelekile ukusuka kwi-iPhone 5 ukuya kwi-iPhone 5S?